Wejiga Wejiga Wejiga iyo alaab-qeybiyeyaasha | New Aasiya Pacific
Aram Qiyaasaha alaabada
Magaca: Difaaca Wajiga
Midabka Midabka: Buluugga, Casaanka, Orange, iwm
Cabbirka: 32x22cm, 33x22cm ama 35x24cm
Adag: 0.24mm ama 0.4mm.
Saamaynta ka hortagga: Waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka maalinlaha ah, boodhka, borotiinka ka soo baxa jikada, ka hortagga buufiska, ka hortagga ceeryaanta, dawada-daadinta, sahayda aan dawooyinka ahayn, ee aan ahayn caafimaad.
Show Bandhig Soo Saar】
Hara Calaamadaha Wax Soo Saarka】
1. Badeecadani waxay u isticmaashaa PET hufan heer sare ah oo ku saabsan go'doominta wajiga oo dhan iyo ilaalinta.
2. Badeecadu waa khafiif culeys, sarreyn xagga hufnaanta ah, oo raaxo leh in la xiro.
3. Badbaadada nabadgelyada, habsami u socodka xirmooyinka dhibcaha sare iyo xafaayadda.
4. Si wax ku ool ah uga hortagga aragtida dhalaalaysa ee ay sababtay kala duwanaanshaha heerkulka iyo uumiga biyaha.
5. Labada dhinac ee labadan qaybood ee sheygan waxaa daboolay filimka anti-static static-ka.
Pe Baaxadda dalabka】
Waxaa loo adeegsaday nolol maalmeedka. Waxaa loo isticmaali karaa xafiiska shaqada, jikada, wadada roobka, xaflada weyn, kulanka iwm.
Ka hortagga qeexitaanka-qeexitaanka sare ee qafiska Go'doominka gaashaanka wejiga, ayaa si balaadhan loogu isticmaalaa baananka, shaqaalaha gaadiidka, maqaayadaha, iyo meelaha dadweynaha; Difaaca wejiga ayaa ka ilaalin kara isticmaalaha inuu ku buufiyo wasaqda wejiga ee nolol maalmeedka iyo shaqada. Isla mar ahaantaana, gaashaanka wejiga ayaa leh waxqabadka anti-fog wuxuuna siiyaa aragti cad.
Introdu Isbarasho dheeri ah
1. Difaaca Wejiga oo buuxa: hufan, khafiifa, raaxo leh, neefsashada, ku habboon ilaalinta isha, afka, sanka ka soo qulqulaha duullimaadyada, dhibcayaasha, aerosols, buufiska iyo buufinnada.
2. Qalabka Birta ah: PET-ga tayo sare leh oo tayo sare leh. waarta iyo wax ku ool ah.
3. Miisaanka fudud & Raaxada Leh: Mid kasta oo ku qalabeysan faashad xarig iyo isbuunbuun madaxa ah, Waxa uu ku habboon yahay xidhashada muddada dheer. Ka hortagga ceeryaanta iyo xumbo ayaa ku yaalliin si ay u bixiyaan raaxo dheeri ah oo si badbaado leh uga soo horjeedda dareeraha iyo qashinka meesha wajiga.
4. Si wax-ku-ool ah u-dhimin Wadaadka: Wejiga wajiga badbaadada wajiga oo dhan ayaa ka ilaaliya buufiska iyo buufinta. Iyada oo la adeegsanayo naqshada ergonomics, gaashaanka wajiga badbaadadeena ayaa u shaqeeya dadka badankood.
Kahor isticmaalka, fadlan si tartiib ah meesha uga saar filimka difaaca ee hufan ee labada dhinac ee lenska.
Report Warbixinta Tijaabada】
Hore: Coronavirus IgG & IgM Test Cassette
Xiga: Dharka Ilaalinta
Wajiga Tooska ah ee Lagu Heli Karo
Ka hortagga Dust ee Wejiga Ka Hortagga
Wejiga ka hortagga Dust ee Dust
Ka hortagga Wejiga Anti Saliida
Ka hortagga Dust face Shield
Wejiga ka hortagga buufiska
Wejiga ka hortagga Biyaha
Dust Proof Bannaanka Wejiga Gaarka ah
Difaaca Wejiga Dust
Wejiga Dust-Proof Caagga Wejiga
Wajiga Dustproof Shield
Wajiga Bannaanka Dustproof ee Dustproof
Wejiga Difaaca Wejiga Dustproof
Wejiga Difaaca Wejiga Dustproof ee Dustproof
Wejiga Wajiga Kala-baxa
Cover Cover Wejiga oo Dhan
Wejiga oo Difaaca Wejiga oo Dhan
Difaaca Wejiga oo Buuxa
Wejiga oo Dhan
Qeexitaan Weyn oo Weyn
Gaashaanka Wejiga ee Tayada Sare leh
Go'doominta Wajiga Wejiga
Wajiga Kahortagga Wejiga
Jikada Difaaca Weelka
Jikada Wejiga Jikada
Saliida-Proof Wajiga Shied
Wajiga saliida laga celiyay Shied
Xayawaanka loo yaqaan 'Pet Face Shield'
Xayawaanka Wejiga ee Balaastigga ah
Difaaca Wejiga Xayawaanka
Difaaca Wejiga Difaaca Xayawaanka
Wejiga Wejiga Caagga ah
Wejiga Badbaadinta Wejiga
Maskaxda Wejiga Maskaxda Maskaxda
Maaskaro Daboolka Maskaxda
Goynta Ijaarka Wejiga
Dib loo Isticmaali Karo Wajiga
Ku buufiso Wajiga Kahortaga Wejiga
Gaashaanka Bannaan ee Fasaxa
Difaaca Wejiga Wajiga
Wejiga Soo Bandhiga Shaashadda
Biyo-Xireenka Weelka Biyo-La'aanta
Difaaca Wejiga Jumlada
Dharka Caafimaadka ee la tuuri karo, Biyaha-Proof Hdpe Apron, Dust-Proof Pet Face Shield, Go'yaal ilaalin ah, Dharka Ilaalinta, Biyo-caddeynta Biyaha,